ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေး အခြေခံများမှ ဝေဖန်သုံးသပ်ခြင်း - အပိုင်း (၅)
၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် အစိုးရစစ်တပ်က လိုင်ဇာမြို့ကို လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် အရပ်သားလူထုများ သေကြေဒဏ်ရာရပြီးနောက် နိုင်ငံတကာမှ အမြန်ဆုံး တုန့်ပြန်သူမှာ ဗြိတိသျှပါလီမန်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့မှာပင် ပါလီမန်အတွင်း ချက်ခြင်း အစည်းအဝေးခေါ် မေးမြန်းမှုများပြုကာ နှစ်ဖက်ကြား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများ အမြန်ဆုံး လုပ်ဆောင်ရန်၊ အရပ်သားများ သေကြေသည်အထိ စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ဆက်လုပ်နေပါက ဥရောပသမဂ္ဂမှ ဆိုင်းငံထားခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ပိတ်ဆို့မှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်ကြောင်း ဖိအားပေးခဲ့သည်။
ဇန်န၀ါရီလ (၁၅) ရက်နေ့တွင် ဥရောပသမဂ္ဂကလည်း လိုင်ဇာတွင် အရပ်သားလူထုများ သေကြေဒဏ်ရာရမှုများကို ထောက်ပြပြီး စစ်ဆင်နေမှုများ ကိုရပ်ဆိုင်းရန်၊ စစ်ဘေးဒုက္ခသည်များအနေဖြင့် လူသားချင်းစာနာသည့် အကူအညီများ အဟန့်အတားမရှိ ရနိုင်ရေးကို အရေးတကြီး ဆောင်ရွက်ရန် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂ၊ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ ဥရောပသမဂ္ဂ စသည့် နိုင်ငံတကာက စိုးရိမ်တကြီးနှင့် တိကျသော တိုက်တွန်းမှုများ၊ ဖိအားပေးမှုများ ပေါ်လာခဲ့ပြီဖြစ်သော်လည်း ကချင်စစ်ပွဲနှင့်စပ်လျှဉ်း၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယခုအချိန်အထိ လေ့လာမှုပင် သေချာစွာ မလုပ်ဆောင်သေး။ ယေဘုယျမျှသာ ပြောဆိုလျှက်ရှိနေသည်။ ဇန်န၀ါရီလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် သူမက ----
“စစ်ပွဲဆိုရင် ဘာစစ်ပွဲမှ မကြိုက်ဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။ ကိုယ့်အချင်းချင်း ဘာပဲပြောပြော ပြည်ထောင်စုသား အချင်းချင်း ဒီလိုတိုက်ရတဲ့အထိ မဖြစ်အောင်လို့ အချင်းချင်းကြားမှာ ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းမှု ရှိသင့်တယ်ဆိုတာ ခဏခဏ ပြောနေတဲ့ ကိစ္စပဲ။ ဆွေးနွေးညှိုနှိုင်းပြီး အဖြေရှာတဲ့ယဉ်ကျေးမှု ဖော်ထုတ်နိုင်မှ ဒါတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်မှာပါ။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဆွေးနွေးညှိနိုင်းပြီး အဖြေရှာသည့် ယဉ်ကျေးမှုကို နှစ်ပေါင်းငါးဆယ် တောက်လျှောက် ငြင်းပယ်နေသူမှာ စစ်အစိုးရနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် “ထိုးစစ်တွေ ချက်ချင်းရပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေ လုပ်ပါ။” ဟု ပြောချင်လျှင် ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် လက်ရှိစစ်အစိုးရကို တည့်တည့်ပြောဖို့ လိုပါမည်။ ၀ါးလုံးရှည်နှင့် ရမ်းပြောနေလျှင် မည်သို့မျှ ထိရောက်နိုင်မည် မဟုတ်ရုံသာမက တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများက နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် တောက်လျှောက်တောင်းဆိုနေမှုကို အသိအမှတ်မပြုရာကျပါမည်။ ထို့အပြင် ယဉ်ကျေးမှုကင်းမဲ့သည့် သဘောမျိုး သုံးနှုန်းလိုက်သောအခါ အဖိနှိပ်ခံလူထုကြီးကိုပါ လူရိုင်းများအဖြစ် ရည်ညွှန်းရာရောက်သွားနိုင်ပါသည်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာမက စာရေးသူလည်းစစ်ပွဲကို မကြိုက်ပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးမြတ်နိုးသူမှန်သမျှ မည်သူမျှလည်း ကြိုက်လိမ့်မည်ဟု မယူဆပါ။ သို့ရာတွင် ယင်းစိတ်ဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး စစ်ပွဲများ တည်ရှိလာခဲ့သည်မှာ ကမ္ဘာဦး အစကထဲကဖြစ်သည်။ ယနေ့လည်း ရှိနေသည်။ နောင်လည်း ရှိနေဦးမည်ဖြစ်သည်။ စစ်ကို မကြိုက်သော်လည်း မတရားသောစစ်ကို တရားသောစစ် ခုခံဆင်နွှဲ၍ ငြိမ်းချမ်းမှုရှာခဲ့ရသည့် သာဓကများ ကမ္ဘာ့သမိုင်း၌ များစွာရှိခဲ့သည်။ နိုင်ငံများနှင့် ဒေသကြီးအတော်များများတွင် သာမက ပထမကမ္ဘာစစ်၊ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်များကို ကြည့်ပါ။ အဓိကမှာ စစ်ပွဲများအား ကြိုက်ခြင်း မကြိုက်ခြင်းကို ရှေ့တန်းတင်ရန်မဟုတ်ဘဲ စစ်ပွဲများ ငြိမ်းသွားစေရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံ၏ ထူးခြားသည့် အခြေအနေပေါ် မူတည်လျှက် အကောင်းဆုံးနည်းနာကို ရှာဖွေရန်သာဖြစ်သည်။
ငှက်ကြီးတောင်ဓါးနှင့် လာခုတ်လျှင်မူ အကြမ်းဘက်မှုကို မကြိုက်ပါဟုဆိုကာ ငြိမ်ခံနေ၍ မရပါ။ တွေ့ရာ တုတ်တချောင်း ကိုင်ပြီး ပြန်လည်ခုခံရပါမည်။ ငှက်ကြီးတောင်ဓါးနှင့် လာခုတ်ကြောင်း သက်သေထင်ရှားလျှင် ခုတ်ခံရသူက တုတ်နှင့် ပြန်ရိုက်သဖြင့် ဓါးနှင့် ခုတ်သူသေဆုံးသွားပါစေဦး၊ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရ မိမိကိုယ်ကိုမိမိ ခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်အတွင်း အကြုံးဝင်သဖြင့် တုတ်နှင့်ခုခံသူသည် ပြစ်မှုမမြောက်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ အဆိုပါအခြေအနေမျိုး၌ ပြန်လည်အကြမ်းဖက်ခုခံခြင်းကို ဥပဒေကပင်ကို တရားဝင် ခွင့်ပြုထားပါသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေ အခန်း(၄) ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် ဆိုင်ရာပြဌာန်းချက် ပုဒ်မ (၁၀၀) ကို လေ့လာကြည့်ပါ။
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာစစ်တပ်သည် ပင်လုံစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖေါက်၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ကချင်လူထု၏ သဘောဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး အတင်းအကြပ် ၀င်ရောက် တပ်စွဲရုံသာမက စစ်တိုက်လေယာဉ်များ၊ စစ်ရဟတ်ယာဉ်များနှင့် အမြောက်လက်နက်ကြီးများကိုပါ သုံးကာ အကြမ်းဖက်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြုကျင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကေအိုင်အိုနှင့် ကချင်လူထုတွင် ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အကြမ်းဘက်မှု ဦးဆောင်ကျူးလွန်သူ စစ်အစိုးရကို အဘယ်ကြောင့် ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်း မပြုသနည်း။ အကြမ်းဖက်မှုကို မကြိုက်ဟူ၍ ယေဘုယျမျှသာ ပြောနေလျှင် ရရာလက်နက်နှင့် ပြန်လည်အကြမ်းဘက် ခုခံရသည့် ကေအိုင်အေနှင့် ကချင်လူထုကိုပါ အကြမ်းဘက်သမားများဟူ၍ ပြောခြင်၍လော။ သို့မဟုတ် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က အကြမ်းဘက်မှုကို မကြိုက်ဟု ပြောသဖြင့် အကြမ်းဖက်လာသည့် မြန်မာအစိုးရတပ် ဘာလုပ်လုပ် ပြုသမျှနုရတော့မည်လော။ ဥပဒေက ပေးအပ်ထားသည့် ပြန်လည်အကြမ်းဖက်ကာ ခုခံပိုင်ခွင့်ကိုပင် အသိအမှတ်မပြုတော့ပြီလော။
“စစ်ပွဲဆိုရင် ဘာစစ်ပွဲမှ မကြိုက်ဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။” ဆိုပါက စစ်ပွဲနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ ချက်ခြင်း ရပ်ဆိုင်းသွားအောင် စစ်အစိုးရ၏တပ်များ ကချင်ပြည်နယ်မှ အမြန်ဆုံး ရုပ်သိမ်းကာ နေပြည်တော်သို့ ပြန်လည်ဆုတ်ခွာ သွားဘို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမတဦးသိန်းစိန်နှင့် ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်တို့အား အတိအလင်း တောင်းဆိုရုံသာရှိသည်။ ယင်းသို့ဖြစ်လျှင် ကေအိုင်အေသည် နောက်မှထက် ချပ်လိုက်ပြီး မည်သည့်စစ်ဆင်မှုမျှ လုပ်မည်မဟုတ်သည်မှာ ရာနုန်းပြည့် သေချာသည်။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ချက်ခြင်း ရသွားပါမည်။
ဤတွင် ကေအိုင်အိုအနေဖြင့် ၁၇ နှစ်တာ အပစ်ရပ်ခဲ့သော်လည်း မည်သည့် နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးမျှမရရုံ သာမက၊ ၁၉၉၄ အပစ်ရပ်ခဲ့သည့် မျဉ်းကြောင်းမှ စစ်အစိုးရ၏ တပ်များက ထပ်မံကျူးကျော်တပ်စွဲမှုများ၊ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်္ဘာလ ၁၄ မှစ၍ ယနေ့ လိုင်ဇာမြို့နားရောက်လာသည်အထိ စစ်ရေးမဟာဗြူဟာအရ အရေးပါသော တောင်ကုန်းများအား စစ်အစိုးရ၏တပ်များက တိုးချဲ့သိမ်းပိုက်တပ်စွဲမှုများအား အသိအမှတ်ပြုပေးရဦးမည့် အနေအထားသို့ ရောက်ရှိသွားသည်။ ဤတွင် တနှစ်ခွဲကျော် မလွှဲမရှောင်သာ ခုခံစစ်ဆင်နွှဲနေရသော ကေအိုင်အိုနှင့် ကချင်လူထု ထပ်မံနစ်နာပါဦးမည်။
ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကို ပင်ပြန်ကြည့်ပါ။ ဘုရင်များ အချင်းချင်း စစ်တိုက်ကြ၊ ဆွေးနွေးညှိနိုင်းပြီး စစ်ရပ်စဲခဲ့ကြသည့်သာဓကများ များစွာရှိခဲ့သည်။ အနီးခေတ်သမိုင်းကိုလည်း ပြန်ကြည့်ပါ။ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲနိုင်ရေးအတွက် တွေ့ဆုံးဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် စစ်ခေါင်းဆောင်အဆက်ဆက်ကို အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကမ်းလှမ်းခဲ့ဘူးသည်။
တိုင်းရင်းသားတပ်ပေါင်းစုများသည်လည်း ထိုနည်းအတူပင်။ ရှစ်လေးလုံးအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နိုင်ငံရေးနယ်ထဲ စရောက်လာခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း အဓိက တပ်ပေါင်းစုကြီးဖြစ်ခဲ့သော မြန်မာပြည်ဒီမိုကရက်တစ် မဟာမိတ်အဖွဲ့ချုပ်ကလည်း စစ်အစိုးရအား နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးရန် စတင်လက်ကမ်းခဲ့သည့် အကြိမ်အရေအတွက်မှာ မနည်းလှ။ (၁၇) နှစ်တာ အပစ်အခတ်ရပ်စဲထားခဲ့သည့် ကာလများအတွင်း နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးရန် ကေအိုင်အိုတဖွဲ့တည်းက တောင်းဆိုသည်ကိုပင် စစ်အစိုးရက မည်သည့်အခါကမျှ လိုက်လျောခဲ့ခြင်းမရှိ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၁၅ နှစ်ကြာမျှ အိမ်အချုပ်နှင့် ရှိနေခဲ့စဉ်အတွင်း နယ်စပ်အခြေပြု ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများနှင့် တိုင်းရင်းသားအင်အားစုများ ပူးပေါင်းကာ ကုလသမဂ္ဂတွင် မြန်မာနိုင်ငံအရေးနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ထွက်လာစေရန် တောင်းဆိုကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်။ တောင်းဆိုသည့်အတိုင်းပင် ကုလသမဂ္ဂကလည်း အကြိမ်ကြိမ် ချမှတ်ပေးခဲ့သည်။ လက်တွေ့ငြင်းပယ်ခဲ့သူမှာ မည်သူနည်း။
ဆွေးနွေးညှိနိုင်းပြီး အဖြေရှာသည့်ယဉ်ကျေးမှုကို နှစ်ပေါင်းငါးဆယ် တောက်လျှောက်ငြင်းပယ်နေသူမှာ စစ်အစိုးရနှင့် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် “ထိုးစစ်တွေ ချက်ခြင်းရပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးညှိနိုင်းမှုတွေ လုပ်ပါ။” ဟု ပြောခြင်လျှင် ဦးသိန်းစိန်ဦးဆောင်သည့် လက်ရှိ စစ်အစိုးရကို တည့်တည့် ပြောဘို့လိုပါမည်။ ၀ါးလုံးရှည်နှင့်ရမ်းပြောနေလျှင် မည်သို့မျှ ထိရောက်နိုင်မည် မဟုတ်ရုံသာမက တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုများက နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးအဖြေရှာရန် တောက်လျှောက်တောင်း ဆိုနေမှုကို အသိအမှတ်မပြုရာကျပါမည်။ ထို့အပြင် ယဉ်ကျေးမှုကင်းမဲ့သည့်သဘောမျိုး သုံးနှုန်းလိုက်သောအခါ အဖိနှိပ်ခံလူထုကြီးကိုပါ လူရိုင်းများအဖြစ် ရည်ညွှန်းရာရောက်သွားနိုင်ပါသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး တချို့က ကျမကို မကြေနပ်ကြဘူး။ မကြေနပ်တာက တဘက်ကို ဘာဖြစ်လို့ မပြောသလဲပေါ့နော်။ ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ ဘက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အဲသည်ဘက်က လုပ်တာတွေဟာ မှားတယ် အပြစ်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘာဖြစ်လို့ တင်းတင်းမာမာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပြောလဲဆိုတာ မကြေနပ်တာတွေ ရှိကြပါတယ်။ သည်လိုပြင်းပြင်းထန်ထန် တဘက်ကို ပြောလို့ ဘာဖြစ်လာမလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ နှစ်ဘက်လုံး ဘယ်သူမှန်တယ်၊ ဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာ ထားလိုက်။ တဘက်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရင် ဟိုတဘက်က ကြေနပ်မှာလား။ အချင်းချင်း ပဋိပက္ခတွေ ပိုပြီးကြီးသွားမယ်။ ကျမက ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပြောလို့ မကြေနပ်ရင် မကြေနပ်ပါစေ ရတယ်။ (လက်ခုပ်သံများ) ပဋိပက္ခတွေ ပိုပြီးကြီးထွားသွားမယ့် ကိစ္စမျိုးကိုတော့ မလုပ်နိုင်ဘူး။”
အမှန်တရား[i]သည် လောက၏သစ္စာဖြစ်သည်။ “ဘာသာရေးတွေ အားလုံးရဲ့ဘာသာရေးဟာ အမှန်တရား ဖြစ်တယ်။” ဟူ၍ ထင်ရှားသည့် အိန္ဒိယ ယောဂီကြီးတပါးက မိန့်ကြားခဲ့ဘူးသည်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဖြစ်စဉ်အတွင်း အမှန်တရားနှင့် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကော်မရှင်[ii] ဟူသည်ကိုပင် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အောက်ပါစကားလုံးများကို အသေအချာ လေ့လာကြည့်မည်ဆိုလျှင် အမှန်တရားကို ပေါ့ပေါ့ပင် သဘောထားနေသည်ဟု သုံးသပ်ရပါမည်။
၀မ်းနည်းစွာ ဆိုပါမည်။ အထက်ပါ စကားလုံးအရ ဆိုလျှင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမှန်တရားကို ရှာဖွေသူ မဟုတ်တော့ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင် သူမသည် အမှန်တရားကို မြတ်နိုးသူ၊ အမှန်တရားကို အလေးအနက်ထားကာ ဖေါ်ထုတ်မည့်သူ၊ အမှန်တရားအတွက် တိုက်ပွဲဝင်မည့်သူဟု မြှော်လင့်နိုင်ပါတော့မည်လား။
သူမအနေဖြင့် အမှန်တရားမှာ အဓိကမဟုတ်တော့။ အမှန်တရားကို ဖိနှိပ်၊ ချိုးနှိမ်၊ ကျူးလွန်မှုပင် ဖြစ်စေဦး၊ ယင်းကို ဖေါ်ထုတ်ဘို့မှာ ပဓါနမကျတော့။ အမှန်တရားကို ဖိနှိပ်၊ ချိုးနှိမ်၊ ကျူးလွန်သူ မကြေနပ်မှာပင် စိုးရိမ်နေရသည်။ ထိုသူ မကြေနပ်အောင် သွားမလုပ်နှင့်။ ပြသနာတွေ ပိုပြီး တက်လာနိုင်သည်။ ပဋိပက္ခတွေ ပိုပြီး ကြီးထွားသွားနိုင်သည်။ သို့ဖြစ်၍ ပဋိပက္ခတွေ ကြီးထွားမလာစေရေးအတွက် ထိုသူမကြိုက်အောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်မပြောနှင့်ဟု ဆိုလိုခြင်းပင်။ ယင်းမှာ အမှန်တရားကို ဖိနှိပ်၊ ချိုးနှိမ်၊ ကျူးလွန်သူများဖြစ်စေဦးတော့ ထိုသူများ ကြေနပ်စေရေးက အဓိကကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်။
ရှေးသရောအခါ၌ “မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာ ဟူသမျှ၊ တာဝန်အရ၊ ဖီဆန်ကြ။” ဟူ၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကြွေးကြော်သံထုတ်ကာ လူထုကို လှုံ့ဆော်စည်းရုံးခဲ့ဘူးသည်။ ထိုကြွေးကြော်သံကို ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များ ၀ိုင်းဝန်းရေးသားခဲ့ကြစဉ်က “တာဝန်အရ” ဟူသော စကားလုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဟု လေ့လာရသည်။ ယခု ဒီချုပ်၏ ဥက္ကဌကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဆိုပါဆောင်ပုဒ်ကို မည်သို့ သဘောထားပါဦးမည်နည်း။ ယနေ့အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာများ ကင်းစင်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် ယင်းဆောင်ပုဒ်အား အသုံးပြုရန်မလိုတော့ဟု ပြောပါမည်လား။ သို့မဟုတ် ဆောင်ပုဒ်ကို “မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာ ဟူသမျှ၊ တာဝန်အရ၊ ငုံ့ခံကြ။” ဟူ၍ ပြောင်းလဲလိုပါသလား။ ဤသို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလျှင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ရနိုင်ပါမည်လား။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် စစ်ပွဲကို ရည်ညွှန်းသည့် အထက်ပါမိန့်ခွန်းနှင့် တဆက်တည်းမှာပင် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုနှင့် စပ်လျှဉ်း၍ သူမက အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အထက်ပါ ပြောကြားချက်ကို လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုရပါမည်။ သူမ၏ ရိုးသားသည့် စေတနာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ပွင့်လင်းစွာ ဆိုရလျှင် ယခုအချိန်အထိမူ လူထုအကြိုက် လိုက်ပြီး ပြောသည့်အဆင့်၊ အပြောသက်သက် အဆင့်တွင်သာ ရှိနေသေးသည်။ လက်တွေ့၌ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသည့် မည်သည့်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှု တစုံတရာကိုမျှ ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်ျနကြောင်း မကြားသိရပါ။ သာမန်လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုအဆင့်ကို ကျော်ရုံသာမက စစ်ရာဇ၀တ်မှုကြီးကို ကျူးလွန်သည့်အဆင့်သို့ ရောက်နေပါပြီ။ သာဓကတခု ပြပါမည်။
ကချင်ပြည်နယ်၏ ဒေသတခုအတွင်း ကျူးလွန်ခံခဲ့ရသည့် မိသားစုတစုအား စာရေးသူကိုယ်တိုင် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့သည့် မှုခင်းတခုကို အကျဉ်းမျှ ပြန်လည်မျှဝေပါမည်။ ကာယကံရှင်များ၏ လုံခြုံရေးအရ ၄င်းတို့၏အမည်နှင့် ဖြစ်ပွားရာဒေသကိုမူ ဤတွင် ဖေါ်ပြမည်မဟုတ်ပါ။
အစိုးရစစ်တပ်များ ၄င်းတို့၏ ရွာအတွင်းသို့ ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြသည်။ ရွာအတွင်းတွင် တိုက်ပွဲလည်း မဖြစ်။ မည်သည့် ကေအိုင်အေစစ်သားမျှလည်း မရှိ။ ရွာသူရွာသားများ အားလုံးနီးပါးမှာ ကြောက်လန့်၍ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြသည်။ ၄င်းတို့မိသားစုတွင် သားသမီးနှစ်ဦး ရှိသည်။ ခင်ပွန်း၏ဖခင်မှာ အသက်ကိုးဆယ် အရွယ်အဖိုးအို ဖြစ်သည်။ ၄င်းလည်း အတူတကွ တအ်ိမ်တည်း နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ခင်ပွန်းက ဖခင်အိုကြီးကိုပါ တပါတည်း ခေါ်ဆောင်ကာ မိသားတစုလုံး ထွက်ပြေးကြရန် ပြင်ဆင်ရာ ၄င်းက တူးတူးခါးခါး ငြင်းဆန်သည်။ သူ အသက်ကြီးပြီဖြစ်၍ အခြားနေရာသို့ မသွားလိုတာ့။ သွားလည်း မသွားနိုင်တော့။ သူ တသက်လုံးနေထိုင်ခဲ့သည့် ဤရွာမှာပင် အသေခံတော့မည်ဟု ဆိုသည်။
သို့နှင့် ခင်ပွန်းသည်မှာလည်း ဖခင်အိုကြီးကို ပစ်ထားပြီး မသွားရက်နိုင်သဖြင့် ဇနီးနှင့် ခလေးနှစ်ဦးကို အခြားရွာသူ ရွာသားများနှင့်အတူ ထွက်ပြေးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးလိုက်သည်။ သူကမူ ဖခင်အိုကြီးနှင့်အတူ ရွာနှင့် မလှမ်းမကမ်း တနေရာတွင် တောစပ်ထဲတွင် ပုန်းအောင်းကျန်ခဲ့သည်။ သစ်ခက်သစ်ရွက်များကို အိပ်ယာအိပ်ခင်းသဘွယ်ပြု၍ မြောက်သတ္တ၀ါများကဲ့သို့ သားအဖ နှစ်ဦးအိပ်စက် နားနေကြရင်း ရွာတွင်းရှိ အစိုးရစစ်ကြောင်း၏ အ၇ိပ်အခြေကို စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ဇနီးနှင့် ခလေးနှစ်ဦးမှာ သွားလာရေး အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကို ဖြတ်သန်းပြီး ဒုက္ခသည်စခန်းတခုသို့ ရောက်သွားကြသည်။ ခင်ပွန်းသည်က ၄င်းတို့တွင်ရှိသော တရုတ်ဖုံးကို သုံး၍ ဇနီးထံ အစိုးရ စစ်ကြောင်း၏ အခြေအနေကို ဆက်တိုက်ပြောပြနေရင်း အားပေးနှစ်သိမ့်ခဲ့သည်။
“မိန်းမရေ။ မပူနဲ့ကွ။ စစ်သားတွေ ရွာကနေ ထွက်သွားကြတော့မယ်။ ငါတို့အိမ်ကလေး အခုအချိန်အထိ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ မင်းတို့ကျမ္မာအောင်နေ။ စိတ်မပူနဲ့။” ယင်းသို့ အထပ်ထပ် အားပေးနေသည့်အတွင်း သူ့မျက်စိရှေ့မှောက်မှာပင် စစ်သားများက သူတို့မိသားစု၏ အိမ်ကလေးအပါအ၀င် ရွာအတွင်းရှိ အိမ်အချို့ကို မီးရှို့လိုက်ကြသည်။ ခင်ပွန်းသည်မှာ ကြည့်နေရင်းမှပင် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးမားစွာ ထိခိုက်ခံစားလိုက်ရသည်။ အရူးတပိုင်းမျှ ဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ရွာအတွင်းမှ အစိုးရစစ်ကြောင်း ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း သူသည် သူ့မိသားစုရှိရာ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့ သွားရောက်ပြီး မနေနိုင်။ ဖခင်အိုကြီးကို စောင့်ရှောက်ပြီး နေရသည်။ နေစရာအိမ်မရှိ။ စားစရာလည်းမရှိ။ မီးလောင်ပြီး ကျန်ခဲ့သည့် စပါးအကြွင်းအကျန်များကို ရှာဖွေကာ ထုထောင်း အခွံချွတ် ချက်ပြုတ်ပြီး ဖခင်အိုကြီးကို ကျွေးမွေးရသည်။
ဤသည်မှာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်ပါ။ ထိုမိသားစုမှာ ယခုတိုင် အသက်ရှင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အလားတူ နိုင်ငံတကာ စစ်ရာဇ၀တ်မှုမြောက်သည့်မှုခင်းမျိုးများ ကချင်ပြည်နယ်တွင် အတော်များများ ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည်။ “လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုမှန်သမျှကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်” ဟူ၍ ကမ္ဘာသိကြေငြာကာ လူထုအများ၏ သောင်းသောင်းဖျဖျ သြဘာလက်ခုပ်များကို ခံယူခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မည်သည့် အမှုအခင်းတခုတလေကိုမျှ အရေးယူကိုင်တွယ်နေသည်ဟု မကြားမိပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ (၁၄) ရက်နေ့က လိုင်ဇာတွင် စစ်အစိုးရတပ်များက လက်နက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခတ်သဖြင့် အရပ်သား သုံးဦး သေဆုံး၊ လေးဦး ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ဤသည်မှာလည်း စစ်ရာဇ၀တ်မှု အထင်အရှားပင်။ “အရပ်သား လူထုတွေ သေကြေတဲ့အထိ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ပါတယ်။” ဟူ၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နုတ်ကလေးမျှပင် ဖွင့်ဟခြင်း မရှိပါတကား။
“ကျမက ပြင်းပြင်းထန်ထန် မပြောလို့ မကြေနပ်ရင် မကြေနပ်ပါစေ ရတယ်။” ဟူ၍ ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြောခဲ့သလိုပင်။ သူမသည် မည်သူ ကြေနပ်သည် ဖြစ်စေ၊ မကြေနပ်သည် ဖြစ်စေ၊ ဂရုစိုက်လိမ့်မည်မဟုတ် ဟူသည့် အနေအထားမျိုးနှင့် ခပ်တင်းတင်းပင် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းတော့မည်လား။ စိုးရိမ်မိသည်မှာ အမှန်ပင်။ ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုကြီးအတွင်းမှာပင် လူထုအသံဟူသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်ရောရှိရဲ့လား။ နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇ၀တ်မှု ကဲ့သို့သော မှုခင်းကြီးများကိုပင် ဥပက္ခာပြုထားနေလျှင် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို မည်သည့်အခါတွင် ရနိုင်ပါမည်နည်း။ အစရှိသဖြင့် တွေးတောစရာ တပုံတပင် ရှိလာပါတော့သည်။
“ရှေးသရောအခါ၌ “မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ၊ တာဝန်အရ ဖီဆန်ကြ။” ဟူ၍ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ကြွေးကြော်သံထုတ်ကာ လူထုကို လှုံ့ဆော်စည်းရုံးခဲ့ဖူးသည်။ ထိုကြွေးကြော်သံကို ဒီချုပ်ခေါင်းဆောင်များ ၀ိုင်းဝန်းရေးသားခဲ့ကြစဉ်က “တာဝန်အရ” ဟူသော စကားလုံးကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်ဟု လေ့လာရသည်။ ယခု ဒီချုပ်၏ ဥက္ကဌကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အဆိုပါဆောင်ပုဒ်ကို မည်သို့သဘောထားပါဦးမည်နည်း။ ယနေ့အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း၌ မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာများ ကင်းစင်သွားပြီဖြစ်သဖြင့် ယင်းဆောင်ပုဒ်အား အသုံးပြုရန် မလိုတော့ဟု ပြောပါမည်လား။ သို့မဟုတ် ဆောင်ပုဒ်ကို “မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာဟူသမျှ၊ တာဝန်အရ ငုံ့ခံကြ။” ဟူ၍ ပြောင်းလဲလိုပါသလား။ ဤသို့ပြောင်းလဲကျင့်သုံးလျှင် ဥပဒေစိုးမိုးရေး ရနိုင်ပါမည်လား။”
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲအရှိန်ပြင်းထန်လာသည်နှင့်အမျှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ဖြေရှင်းပေးရန် တောင်းဆိုသံများ ပို၍ ပို၍ ကျယ်လောင်စွာ ကြားလာရသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည် ဆိုစေဦး။ မည်သည့်အနေအထားဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဟူသည်မှာ အရေးကြီးလာသည်။ အမှန်တရားကို မဖေါ်ထုတ်၊ အမှန်တရားဘက်မှ မရပ်တည်ဘဲ၊ အလယ်မှာနေသည်ဟု ကြွေးကြော်ကာ မရှင်းမရှင်း ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိလာလျှင် နစ်နာမှုများ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မလား ဟူ၍ ရိုးသားစွာ စိုးရိမ်မိသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။
စစ်အစိုးရဘက်က နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုများလုပ်မည်ဟု ကမ်းလှမ်းရာတွင် ဦးအောင်မင်းက ဥပဒေဘောင်အတွင်းက ပေးနိုင်သမျှ အခွင့်အရေးများ အားလုံးပေးသွားမည်ဟု ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောကြားခဲ့သည်။ ဦးအောင်မင်း ဆိုလိုသည့် ဥပဒေဘောင် ဆိုသည်မှာ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အပစ်ရပ်ပြီးလျှင် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ သဘာဝဓါတ်ငွေ့များ တရုတ်ကို ရောင်းချုနိင်ရေးအတွက် ကချင်ပြည်နယ်နယ်စပ်ကို ဖြတ်သန်းသွားသည် ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများ လုံခြုံစွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ အစိုးရလိုင်စင်ချပေးထားသည့် ကျောက်တွင်းတူးကုမ္ပဏီများက တူးယူထားပြီး ဖားကန့်ဒေသ ဂိုဒေါင်များအတွင်းမှာ ပင်အောင်းနေသည့် ကျောက်စိမ်းတုံးများကို ထုတ်ယူကာ နေပြည်တော်တွင် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲ ခင်းကျင်း ရောင်းချနိုင်တော့မည်။ တာပိန်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်ုးကို ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်။ ကချင်ပြည်နယ်ကို ဖြတ်သန်းပြီး တရုတ်ပြည်ဘက်သို့ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းသစ်များကို ဖေါက်ပြီး အကျိုးအမြတ်ရှာနိုင်တော့မည်။
သို့ဖြစ်၍ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို ဦးတည်၍ ထိုးစစ်ကြီးများ ဆင်နွှဲ၊ စစ်ရေးအရ အကြီးအကျယ် ဖိအားပေး၊ အရပ်သားများ နေထိုင်နေကြသည်ကို သိပါလျှက် လိုင်ဇာမြို့ကိုပါ အမြှောက်ကြီးများနှင့် ပစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရပ်သားများ သေကြေသည်အထိ စစ်ဖြစ်နေပြီဟု တကမ္ဘာလုံးက သိသွားလျှင် နှစ်ဖက်အပစ်အခတ် ရပ်ကြဘို့ ဖိအားပေးမှုများ အားကောင်းကောင်းနှင့် ကျရောက်လာမည်။ အပစ်အခတ်ချက်ခြင်းရပ် ဟူသော အသံများ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာမည်။ ထိုအခါတွင် အစိုးရဘက်ကတော့ အပစ်ရပ်ရန် အသင့်ရှိပါလျှက် ကေအိုင်အေက မိုက်မိုက်ကန်းကန်း ဆက်တိုက်နေသဖြင့် မသေသင့်သော လူထုများ သေကြေနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု အစိုးရက အသံကောင်းဟစ်ဦးမည်။ ဤသည်မှာ အမှန်တရားဖြစ်သည်။
ယင်းအမှန်တရားကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သိမြင်ဘို့ ကြိုးစားပါမည်လား။ သိမြင်သည် ထားဦးတော့ ကမ္ဘာသိအောင် ဖေါ်ထုတ်၇ဲပါမည်လား။ “စစ်ပွဲဆိုရင် ဘာစစ်ပွဲမှ မကြိုက်ဘူး။ အကြမ်းဖက်မှုကိုလည်း မကြိုက်ဘူး။” ဟူ၍သာ တတွတ်တွတ် ရွတ်နေရုံမျှဆိုလျှင်မူ ဦးသိန်းစိန်၏ စစ်အစိုးရက များစွာဝမ်းမြောက်ပါမည်။ နှစ်ဘက် အပစ်အခတ်၇ပ်စဲရေးသာ အဓိကဖြစ်ပြီး ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ သက်ဆိုးရှည်စေမည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကိုသာ ဦးတည်နေသောကြောင့်ပင်။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားနေသော စစ်ပွဲများ၏ အရင်းခံမှာ ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးပြသနာဖြစ်သည်။ ယင်းနှင့် စပ်လျှဉ်းသည့် အမှန်တရားမှာ ပင်လုံစာချုပ်ဖြစ်သည်။ ပင်လုံစာချုပ်ပါ တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်များ၏ အခွင့်အရေးကို ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့်အညီ ဖေါ်ဆောင်ရန် ကြိုးပမ်းမည်ဆိုလျှင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အလုပ်မဖြစ်နိုင်။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြောင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းကြီး (၁၁) ဖွဲ့နှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ယူအင်န်အက်ဖ်စီက ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ အဖွဲ့ဝင်တဖွဲ့ဖြစ်သည့် ကေအိုင်အိုကလည်း ယင်းအတိုင်းပင် ရပ်တည်သည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကို တောင်းဆိုသည်။ ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီလ (၁၄) ရက်နေ့ မှာပင် ကေအိုင်အို၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးလနန်း၏ အောက်ပါ အင်တာဗျူးကို လေ့လာပါ။
“အဓိကကတော့ တိုင်းရင်းသားတွေ ပြောဆိုနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို ၀ိုင်းပြီးတော့ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကို စတင်ဖို့ပါပဲ။ အရင်တုန်းက (အစိုးရက) နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဘို့ မပြောဘူး။ ဒီနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးရအောင်လို့ ပြောလာတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရင်ထဲမှာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဘောင်ထဲကပဲ လုပ်ဆောင်သွားကြမယ် ဆိုတာမျိုး။ ပြောရရင်တော့ ဒီနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလည်း အဖြေကောင်းရနိုင်တဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်စရာအကြောင်း မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကို အခြေခံတဲ့ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုကို ပုံဖော်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စ လွယ်လွယ်နဲ့ ပြေလည်သွားမှာပါ။ အခု သူတို့ ဆန္ဒရှိပြီး အခု ဖော်ထုတ်လိုက်တာနဲ့ တစ်ရက် နှစ်ရက်အတွင်းမှာ အေးငြိမ်းသွားနိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်တယ်။”
လမ်းနှစ်သွယ်မှာ ရှင်းနေပါသည်။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို အမြန်ဆုံးလုပ်၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဟူသည်ကို မြှောထားကာ ကေအိုင်အိုအပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများအား၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံဘောင်အတွင်းသို့ ပြန်လည်ရိုက်သွင်းရန်သာဖြစ်သည်။ အမျိုးသားညီလာခံကို ၁၅ နှစ်တာ အချိန်ဆွဲကာ ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့သော ဦးသိန်းစိန်သည် မည်သည့် ဦးတည်ချက်ကို သွားမှန်းမသိသော နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဟူသည်ကို နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်းများစွာ အချိန်ဆွဲကာ ကျင်းပသွားရန်မှာ မည်သို့မျှ အခက်အခဲမရှိနိုင်ပါ။ ဤသည်မှာ စစ်အစိုးရ လျှောက်လှမ်းနေသော နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။
သို့ဖြစ်၍ ကေအိုင်အိုသည် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ၏ တိကျသော ဦးတည်ချက်ကို ကြိုတင်အာမခံချက် ရထားလိုပုံရှိသည်။ ပင်လုံစာချုပ်ကို ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ကျင့်သုံးရန် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ပျက်ပြီးကထဲက ကေအိုင်အိုက ပိုမို အလေးအနက်ထား တိုက်တွန်းလျှက်ရှိသည်။ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးကိုလည်း ထပ်ခါထပ်ခါ တင်ပြလျှက်ရှိသည်။ ပင်လုံစာချုပ် အခြေခံပေါ်တွင် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်မည်ဟု ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက တရားဝင် ကြေငြာပြီးနောက်တွင် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကို လက်ခံ၊ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင် ပါဝင်သွားလိုပုံရသည်။ ဤသည်မှာ ကေအိုင်အို လျှောက်လှမ်းလိုသော နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဟု စာရေးသူ နားလည်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်္ဘာလ (၂) ရက်နေ့တွင် လွှတ်တော်ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းက တိုင်းရင်းသားတွေ လိုလားသည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ဟုဆိုကာ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေမူကြမ်း တခုရေးသားရန် လွှတ်တော်အမတ်များဖြစ်ကြသည့် ဦးတီခွန်မြတ်နှင့် ဒေါ်နန်းဝါနုတို့အား တာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးချိန်မှစ၍ ဖက်ဒရယ်ကို ခွဲထွက်ရေးဟူ၍ ၀ါဒဖြန့်ကာ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို ငြင်းပယ်၊ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေးဟူသည်ကို အကြောင်းပြကာ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုတရပ်လုံးကို နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်ကျော် ဖိနှိပ်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စစ်အာဏာရှင်များက ဖက်ဒရယ်ဟူသည်မှာ တိုင်းရင်းသားများ၏ အခွင့်အရေးကို အာမခံချက်ပေးသည့် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ပုံဖြစ်ကြောင်း အတိအလင်း ၀န်ခံလာခဲ့ရပြီဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် စစ်အာဏာရှင်များသည် ဖက်ဒရယ်ကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာပင် တည်ဆောက်၍ ရနိုင်သလိုလို ပုံဖေါ်ကာ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများအား ဆက်လက်လှည့်ဖျားရန် ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် နံပါတ်စင်တပ်ပြီး အရင်ဝေဖန်ကြည့်ပါ
ကို အောင် ထူးရေ အဖျက်သမားဆိုတာ ဘယ်လို လူကို ပြောတာပါလဲ သိရင်ပြောပြပါ ။ နောက်ပြီး မေးချင် တာလေးတခုကို လည်းပြောပြပေးပါဗျာ ။ အဲဒါက တော့ ။ ။ မိသားစု တခုမှာ လူ 8 ယောက် ရှိတယ်ဗျ ။ တစ်အိမ်သား လုံး တောင်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက် တာပေါ့ ဗျာ ။ အဲဒီမိသားစုမှာဖ ခင် က အရက်သမား ကြီးပေါ့ ဗျာ။ အိမ်အလုပ်ဆို ဘာမှ မယ်မယ် ရရ မလုပ်ဘဲ အိမ်က ပိုက်ဆံ အတင်းတောင်းလိုက် မရ ရင် ခိုးပြီး အရက်သောက် မူးနေ တာပေါ့ ဗျာ ။ နောက် အဲ ဒီမိသားစု မှာ နို့ညှာ သားကလည်း ကျောင်းပြီးတော့ အလုပ် ရှာမယ်ဆို ပြီး အိမ်တွင်းရေး မ ပြေလည် တော့  ထွက်သွား တာပေါ့ဗျာ ။ သားသမီး ဆိုတော့ လည်း ဦးဆောင် ဖခင် ကမှ မ ကောင်းတော့အိမ် မှာ ဘယ်နေချင် ပါ့ မလဲ ။ ဒီ လိုနဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ် ကျော်လောက် အဆင် မ ပြေ ဖြစ် ခဲ့ ရတဲ့ အိမ် မှာ တ နေ့ မှာတော့ ဖခင် ကလည်း ကျမ်းမာရေး ကြောင့် အရက်ဖြတ်ပြီး နေလာ , နောက် အိမ် ရဲ့ စီးပွါးရေးကလည်း ဆိုးဝါး ။ ပြီးတော့ ဘေး အိမ်တွေရဲ့ ကာလသား ဂျပိုး တွေ က နှမ နဲ့ အမ တွေ ကို ခန ခန စော်ကားနေ တော့ စောစော က သားဖြစ် သူကိုအိမ်ပြန်ပြီး မိသားစု နဲ့ အတူ လုပ်ကိုင် စားသောက်ဖို့ အ မေ ဖြစ်သူက ခေါ်တာ ပေါ့ ။ ဒါပေမဲ့ သားဖြစ်သူက မြို့ မှာလဲ ပျော်နေတော့ အ မေ ဖြစ်သူကို သူ က ဘာပြန် ပြောသလဲ ဆိုတော့ ။ ။ ဟုတ်ပြီ အ မေ သားပြန်ပြီး မိသားစု နဲ့အတူ တောင်ယာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင် စားပါ့မယ် ။ ဒါပေမယ့် အိမ်က နွားနှစ်ကောင် နဲ့ တော့ အရင် လို မလုပ်ချင် ဘူး ။ သူများတွေ လို လယ်ထွန်စက်တွေနဲ့ ပဲ လုပ်ချင် တယ် အဲဒါ အ မေ ဝယ်ပေးနိင် ရင် သားပြန်လာမယ် ပြောတော့ မိခင် ဖြစ်သူ မှာ အခက် တွေ့ နေ ရ ရှာတယ် ။ လယ်ထွန်စက် ဝယ်ပြီး ပေးချင် ပေမဲ့ အ ခြေအ နေကလည်း ငွေက မပြည့် သေးတော့ မိခင်ဖြစ်သူ ခင် မျာ ---------- ? ကိုအောင် ထူးရေ ဒီမိသားစု လေး အဆင်ပြေ သွား အောင် ဘယ် သူတွေ ဘယ် လို လုပ်သင့် လဲ ဆိုတာ ကို အကြံ ပေး ကြည့် ပါ ဗျာ ။ ။ ။ ။
အပြုသဘောဝေဖန်တဲ့စာရေးသူကိုလေးစားပါတယ်..ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဒီလိုစာမျိုးတွေကရှိပါတယ်..သတင်းစာဖတ်ဖြစ်တဲ့သူတွေသိပါလိမ့်မယ်...ကိုအောင်ထူး ကျနော် ခင်ဗျားကိုလူချင်းမသိမမြင်ဘူးပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုသုံးပြီး လွတ်လပ်တဲ့ရေးသားမှု့အတွက် ကျနော်လေးစားပါတယ်။ Personal တိုက်ခိုက်မှုတွေမပါတဲ့ critique တခုမို့လို့ ဖတ်ရတာကောင်းပါတယ်။ တခုတော့ရှိတာပေါ့...Critical Thinking မရှိပဲ လူအခြင်းခြင်းကိုးကွယ်နေသူတွေကတော့ ခင်ဗျားကို ဆဲကြမယ် မင်းကဘာလုပ်ခဲ့လို့လဲ ကိုယ့်ဘာသာလဲပြန်ဆန်းစစ်ဦးဆိုပြီး သာမန်ခပ်ညံ့ညံ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဝေဖန်ကြမှာတော့ အသေအချာပဲ ကိုအောင်ထူးရေ. ကိုယ်ရေးတဲ့စာက ကိုယ့်အဆင့်အတန်းကိုဖော်ပြပါတယ်။
Daw Su has just read your article.
She said she will follow your instruction. She requested you to write like this more.
Don,t walk to over left & right .
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၀၁- ၁၉-၂၀၁၃)
ကိုအောင်ထူး။ ခင်ဗျားက ကချင်ပြည်နယ်ကနေ တပ်မတော်ဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ် ဆိုထားပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အချုပ်အချာ အာဏာနဲ. တိုင်းပြည်ဘယ်ရောက်သွားမလဲ?
ဒီလိုဘဲ ကရင်ပြည်နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်က တပ်တွေအပြင် ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းက တပ်တွေ အကုန်ရုပ်လိုက်ရင်၊ အဲဒီနယ်မြေတွေ ဘာဖြစ်သွားမလဲ??
ပြည်သူတွေရဲ. အိုးအိမ်တွေ၊ အသက်တွေကို ကာကွယ်ဘို. တိုင်းပြည်တပြည်မှာ စစ်တပ်ဆိုတာ ရှိကုိုရှိရမယ်။
နောက်တချက်က တိုင်းပြည်တပြည်မှာ စင်ပြိုင် စစ်တပ်နှစ်တပ် ရှိနေရင် ပြည်တွင်းစစ်ဟာ အချိန်မရွေး ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဥပမာ လက်ဘနွန်။ ရုပ်စွ အဆုံး ပါလက်စတိုင်းမှာ ပီအယ်အိုနဲ. ဟားမက်စ်။
ကချင်ပြည်နယ်မှာ ကချင်တပ်။ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ရှမ်းတပ်။ ရန်ကုန်မှာ ရန်ကုန်တပ်တွေ သီးခြားဖွဲ.ပြီး၊ သီးခြားရပ်တည်ရင် အဲဒီတိုင်းပြည်မှ မပျက်၊ ဘယ်တိုင်းပြည်မှ မပျက်ဘူး။
ခင်ဗျား ပထမပိုင်းမှာ ရေးခဲ့တဲ့ ပြည်ထောင်စုတပ်ဖွဲ.မယ်ဆိုရင် လက်ခံနိုင်စရာရှိတယ်။ တပ်မတော်ရဲ. ဖွဲ.စည်းပုံကို ပြင်ရလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ. ဋ္ဌသဇာအောက်မှာရှိတဲ့ တခုတည်းသေား အမိန်.ပေး စစ်ဌာနချုပ်အောက်မှာ ထားခဲ့မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
စစ်အစိုးရကို တိုက်နေသူတိုင်းကို မဟာမိတ်လို. ဆက်လက်ခံလို. မရဘူး။ တိုင်းပြည်ကခွဲထွက် ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ လက်နက်ကိုင် တိုင်းရင်းသား ကရိုနီတွေအဖြစ် ဆက်ရပ်တည်မဲ့ ဘယ်တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ.အစည်းကို မဆို ရန်သူသတ်မှတ်ရမယ်။
လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုကို အခြေခံတဲ့ တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေရဲ. သဘောတရားကို ပြောင်းပစ်ဘို.လိုသလို၊ စစ်တပ်ကို မားဖီးယားဂိုဏ်းလို လုပ်စားနေတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်မှ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် အဆင့် ရောက်မယ် ယုံဋ္ဌကည်တယ်။
ထိုင်နေအကောင်းသား ထသွားမှကျိုးမှန်းသိဆိုတာ ဒီလိုဆောင်းပါးရှင်မျိုးပေါ့ဗျ၊၊
ကောင်းပါတယ် ဗျာ .. ဒီလို အဆင့်အတန်းရှိရှိ ဝေဖန်တာဟာ ဒီမိုကရေစီ အတွက် လမ်း စ ပါ။ ဆက်ရေးပါ.. ကျွန်တော်လည်း အမေစုကို ချစ်တယ်။ ဒီလို ဝေဖန်ခြင်း ဟာ အမေစု ကို ပိုပြီး လမ်းပြပေး နိုင်တယ်။ မျက်ကန်း ချစ် ချစ်နေတာထက် အခု လို ဝေဖန်နိုင်တာပိုကောင်းပါတယ်။ အခုလို တကူးတက အချိန်ပေးပြီး နေမကောင်းတဲ့ ကြားက တင်ပေးတဲ့ဦးလွဏ်းဆွေကိုလည်းကျေးဇူးတယ်ပါတယ်။
သလိုဘဲ ဒါမှမဟုတ်ဒေါ်စုအကြောင်းရေးမှထမင်းစားရ တာလားမသိဘူး
Mr. Aung too is very good writer,I respect him,he hasalot of experience,I believe
him,hi's honest man.
Good Job Mr.aung Too
This is notablaming article to DASSK.This is the true critique article for DASSK and she should read and study then rethink about it.I known well Ko Aung Htoo in aliberty area 20 years ago.He love his country and his nations.Every freedom fighter were strong patriots that I believe truly.We need to think about our country widely that all I have to say.
I am trusting DASSK,she is only the one big leader in this situation.
အပြောတွေလျှော့ပါ ။ အခုလုပ်နေတာတွေ က တိတိကျကျ ဘာအဖြေမှ
မထွက်ဘူး ယောင်ဝါးဝါးဖြစ်နေတယ် ။ ကော်မတီတွေ ကလဲ ဖွဲ့တာအများ
ကြီးပဲ။ ပြတ်ပြတ်သားသား မရှိဘူး။
ဒီလောက် အောင်မြင်မှုလေးရပြီး ဟိုဂျာနယ်ကချီးကျူး ဒီဂျာနယ်ကဓါတ်ပုံ
၂၀၁၅ မရောက်ခင် ပြီးပြတ်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှ တော်ရာ ကျမယ်။
မဟုတ်ရင် အီဂျစ်က မူဘာရတ် လိုဖြစ်လာရင် ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို
သမ္မတကြီးနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရရွှေမန်းကို တင်ပြလိုတာ ဘယ်ဌာနမဆို
အောက်ခြေဝန်ထမ်းတွေကိုပစ်မထားပါနဲ့ သူတို့ လဲ ပြည်သူထဲက ပြည်သူ
တွေပါပဲ။ ပင်စင်သွားခါနီး နိုင်ငံတာဝန်ကျေတဲ့ သူတွေကို နေစရာစီစဉ်ပေးဖို့
ကောင်းပါတယ်။ EA 1/2 တွေ ကိုလဲ ပစ်မထားပါနဲ့ ။အရပ်ဖက် ထည့်ပြန်
တော့လဲ တဆင့်နိမ့်တွေ နဲ့မကောင်းပါဘူး ။ သူ့ဒေသနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒေသခံ
တွေ နယ်ပြောင်းတွေ ဆောင်ရွှက်ပေးသင့်ပါတယ်။
ဝန်ထမ်းအချင်းချင်း နဲ့ ပြည်သူအပေါ်က ဖြတ်စားလပ်စားတွေ ကိုစစ်ပါ
မှန်ကန်ရင် သတင်းမှာကြေညာပြီး နှစ်ရှည်ထောင်သာချပါ ထောက်ခံပါတယ်
ဒါပေမဲ့ စစ်တဲ့သူ အပြစ်ဒါဏ်ချတဲ့ သူကတော့ မှန်ပြီ လိပ်ပြာသန့် ဖို့ လိုပါတယ်
ဌာနတွေကိုစစ်ရတဲ့ စာရင်းစစ်တွေက သွားစစ်ရတဲ့နေရာတွေမှာ သေနတ်မလို
တရားဝင်တိုက်ခွင့် လိုင်စင်ရတွေ မဖြစ်ဖို့ စားရင်းစစ်တွေ မဖြစ်ဖို့တော့လိုပါ
တယ်။ လူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး တချို့ဆိုရင် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း
ရဲ့ % သတ်မှတ်ပြီး အပေးအယူ လုပ်ခဲ့ ကြတာတွေ ရှိပါတယ်
ကိုယ်ပျောက် သတင်းပေးအဖွဲ့ ထားသင့်ပါပြီ။
တာဝန် ကြီးကြီးပေးရင် တိုင်းရင်းသားသွေးမဟုတ်ပဲ တရုတ် ကုလားသွေး
နှောတာတွေ တာဝန်မပေးမိ ဖို့လိုပါတယ် ပေးထားပြီးသား ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို
တရုတ် ကုလားမုန်းတီးမှုတွေ အောက်ခြေမှာကိန်းအောင်းနေကြပါတယ်။ ။ ။
ဒေါစုနောက်သိပ်မလိုက်နဲ့ဒေါစုထောင်ထဲနောက်တခါဝင်ရင်မင်တို့တွေလဲအစုလိုက်ဝင်နေရမယ် အထူးသတိပေစာ NLDမှာကုလားမျာကြီးစိုနေပြီကိုသတိပေးလိုက်ပါသည်
ဦးအောင်ထူးရေးတဲ့စာတွေ တလုံးမကျန်ကြိုက်တယ်ဗျာ အထူးသဖြင့် အဲဒီစာသား (ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာစစ်တပ်သည် ပင်လုံစာချုပ်ပါ သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖေါက်၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းသို့ ကချင်လူထု၏ သဘောဆန္ဒနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး အတင်းအကြပ် ၀င်ရောက် တပ်စွဲရုံသာမက စစ်တိုက်လေယာဉ်များ၊ စစ်ရဟတ်ယာဉ်များနှင့် အမြောက်လက်နက်ကြီးများကိုပါ သုံးကာ အကြမ်းဖက်မှုကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြုကျင့်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ကေအိုင်အိုနှင့် ကချင်လူထုတွင် ကာကွယ်ခုခံပိုင်ခွင့် အပြည့်အ၀ရှိသည်။ )
ရထားစီးနေတုန်းဘုမသိ ဘမသိ နဲ့ KIA မိုင်းထောင်လို့ သေသွားတဲ့သူ
တွေ အတွက် KIA တာဝန်မရှိဘူးလား?
စစ်းသားတွေကအရပ်ဝတ်တွေနဲ့ရထားတွေနဲ့သွားကလိမ်ညဏ်ဆင်ပြီးသွားနေတာရထားမကလို့လေယဉ်ကိုတောင်ဗုန်းထောင်သင့်တာသေးသွားတဲသူတွေအတွက် kla မှာလုံးဝတာဝန်မရှိပါ သေးသွားတဲ့သူတွေကတော့စစ်သားတွေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်kla မှာလုံးဝအပြစ်မရှိဘူး
သေချာတာတခုတော့ရှိတယ်.....ဒေါ်စုNLD ပါတီမှတ်ပုံတင်ပြီး လွှတ်တော်ထဲဝင်ပြီးနောက် ......လူထုဘက်မှတ်မှတ်မရပ်တော့ဘဲ....နှစ်ခွရပ်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။။ ပါတီခိုင်မြဲအောင်လုပ်မလား....??လူထုဘက်ရပ်မလား..?
အဲဒီလူတွေအတွက်လည်း us ဒေါ်လာတစ်သိန်းပေးမယ် ဟုတ်တယ်မလားအောင်ထူး။ဟဲဟဲအားလုံးရစေရမယ် ကိုယ်ထိုးသလောက်ကိုယ်ရမယ်။လက်ရှောင်။
kia ကအပြစ်မရှိယုံတင်မကဘူး ဥာဏ်လည်းကောင်းတယ် ကြည့်ပါလား အရပ်သားတွေထဲမှာအရပ်ဝတ်စစ်သားပဲသီး သန့်ခွဲပြီးမိုင်းထောင်တာကွ အံ့ရောအံ့ရော။သူတို့သုံးတဲ့မိုင်းက အရပ်သားဆိုမကွဲဘူး။အရပ်ဝတ်စစ်သားမှ ပေါက်ကွဲတာ အဆင့်မြင့်တဲ့မိုင်း။တကယ်လို့မတော်တဆအရပ်သားအစစ်ပါသွားခဲ့ရင် စစ်သားအရပ်ဝတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတုန်းကျဆုံးသွားတဲအတွက် စစ်ပင်စင်ထုတ်လို့ရအောင် kia ထောက်ခံပေးပါအုံး။
မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးကို သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်- ဒေါ်စုအုပ်စု၊ သိန်းစိန်အုပ်စု - ၂အုပ်စုတွေ့တယ်။ ဒေါ်စုကို ဝေဖန်ရင် ဒေါ်စုအုပ်စုက မကြိုက်၊ မကြိုက်သည့်အပြင် တရားဥပဒေဆိုသည်ကိုပင် မျက်ကွယ်ပြုပြီး ဒေါ်စု ကိုထောက်ခံမယ့်သဘောပါ။ သိန်းစိန်အစိုးရကို မတရားလို့ပြောရင်- ဒေါ်စုကြိုက်သမားအချို့နဲ့ သိန်းစိန်အုပ်စုမကြိုက်-- သူတို့တွေလည်းပဲ တ၇ားဥပဒေကို မျက်ကွယ်ပြုပြီး သိန်းစိန်ကိုထောက်ခံနေကြတယ်။ အဆိုးဆုံးက ဒေါ်စုသည်လည် သိန်းစိန်ကိုကြိုက်တဲ့ အုပ်စုထဲ့ပါနေတော့-- ဒေါ်စုနောက်လိုက်တေလည်း လိုက်ကြိုက်ရပြီပေါ့။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံနိုင်ငံရေးက ဒေါ်စုက သိန်းစိန်ကိုထောက့်ပံ့ပေးပြီး ပြည်သူပိုင်ကို ခရိုနီပိုင်၊ စစ်တပ်ပိုင်-- လုပ်နေကြတယ်လို့ မြင်တယ်။ ဒေါ်စု ကို တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဥက္ကဋ္ဌ ရာထူးပေးထားတာ- တရားဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လာရင် သူမမှာ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိတယ်။ သို့သော် မပြောဘူး။
ခုလဲပဲ အောင်ထူးက သမာသမကျကျဝေဖန်ထားတာကို ဒေါ်စုကြိုက်တွေက မနှစ်သက်သလို၊ သိန်းစိန်ကြိုက်တွေကလည်း သဘောမကျကြဘူးဆိုတာ အထက်ပါ comment တွေကိုဖတ်ရင်သိသာပါတယ်။
ခက်တာက နိုင်ငံမှာလဲ ပြည်နယ်သားတွေကတောင် ဒေါ်စုနဲ့၊ သိန်းစိန် - ဒီလူလိမ် နှစ်အုပ်စုကိုထောက်ခံနေတော့ အမှန်တရားကိုထောက်ခံတဲံသူက နဲနဲလေးရေး။
အမှန်တွေကိုထောက်ပြတာမကြိုက်တဲ့ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ဥက္ကဋ္ဌ နဲ့ အဖွဲ့နှင့် တရားဥပဒေအရ စီရင်တာကို မနှစ်သက်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရရှိနေသမျှ မြန်မာနိုငံဘယ်တော့မှ မငြိမ်းချမ်းနိုင်ဘူး။ သူတို့တွေက စကားလှလှလေးတွေနဲ့ အမှန်တရားကို ဖုန်းဖိနေကြလို့ပဲ။
မှန်တယ် ဒါကြောင့်မို့ အမှန်တရားလို့ထင်တဲ့အမှန်တရားကိုပြောချင်ဆိုချင်တဲ့လူက ဒီမငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံမှာနေပြီးပြောလို့မရဘူးဒါ ကြောင့်ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းသာသာယာယာနဲ့ပြောလို့ရတဲ့နိုင်ငံကနေ အသာစံပြီးပြောရတာပေါ့။တိုင်းပြည်ပျက်လေစီးပွါးဖြစ်လေ အထဲမှာခရိုနီဝိသမလောဘသားတွင်မကဘူး နိုင်ငံရေးလုပ်စားသမားတွေလည်းပါတယ်ကွ။သူတို့ကလည်းစကားလှလှ နဲ့တိုင်းပြည်ရေးရာတွေကိုနင်းပြီးကိုယ့်ဘဝကို ကိုယ်တည်ဆောက်သွားကြတာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ့။
ကျုပ် ပြောတာ အမှန် သူများ ပြောတာ အမှား လို့ ပြောတဲ့ မောင် မင်းရဲ့ အယူအဆ က ဒီ မို က ရတ် တစ် စံ နှုန်း လို့ များ ထင်နေပြီ လား။ဒီ နိုင် ငံ မှာ ယေရှု သခင် လာအုပ် ချုပ် ရင်တောင် ခင် များတို့ ရဲ့ အပြစ် တင် မှု က လွတ်မှာ မဟုတ် ဘူး .......mg mg .blogspot ရေ.........
U Aung Htoo, you did it great. If Daw Su had read your article she might change her mine. That's what people hope to see of late year 2000 way with strongly. No one know what had done with Thein Sein government about agreement. Past and present situation, she is swimming behind the boat of government. We hope to see sooner of later she will do her direction with U turn. Will see with hope.
ရေးချင်တဲ့လူကလည်း ရေးချင်တာရေး မြောက်ပြီးတော့
ဘောမချင်တဲ့ကောင် တွေကလည်း နှမပေး ဘောဆေးပေး တော်တော် ဖင်ယားနေတဲ့ သောင်းကျမ်း
နေရာတကာဆွေနွေး တိုင်း တာရမယ်ဆိုရင် ဒို့နိုင် ငံလွတ်လပ်ရေးရ အောင်လူတွေ အ သေခံပြီး တိုက်ခဲ့စရာ လိုလို့လား လူမျိုးခြား တွေတိုင်း ရင်း သားတွေလာမ ပြေားနဲ့အား လုံးသိတယ်
Cope Suan Pau said...
နောက်ဆုံးမှာတော့ သိန်းစိန်အရပ်သားအစိုးရဆိုတာ စစ်အာဏာကြီးစိုးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ငြင်းဆိုလို့မရကြောင်းပါခင်ဗျား။ မြန်မာပြည်တော့ဖြေးဖြေးပေါ့နော်။
ဒီလိုပုံစံ အဖြစ်မျိုး နောင်မကြိုက်ဘူးဆိုလျှင် ခုလက်ရှိ တပ်မတော်ဆိုတာကို အမြစ်ကစ ဖျက်သိမ်းပစ်မှရမယ်။ နောက်မှ မျိုးဆက်သစ်လူငယ် အမြင်မှန်တွေနဲ့ပဲ ဖွဲ့စည်းတဲ့ ပြည်ထောင်စု ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့များသာ ရှိသင့်ပါတယ်။ ပြည်ပရန်သူမရှိတဲ့ မြန်မာပြည်မှာ တပ်မတော်ဆိုတာကြီးကို အရှေ့တောင်အာရှမှာ အင်အားကြီးမားဆုံးဖွဲ့စည်းတာ အဓိပ္ပါယ် မရှိပါ။ နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက် ရ၀% မှ ၉၀% ထိ သုံးစွဲနေပြီး၊ ဗိုလ်ချုပ်တိုက်ဆောက်၊ စစ်သားချိုင်းထောက်၊ ပြည်သူဗိုက်မှောက် လမ်းစဉ်ပါပဲ။ ဒုတိယ
မယ်၊Company. တွေ အ၇င်းကြေတာကြာနေပါပြီ ။
သွားမေးကြည်.ပါ ။ ။ ။ ။
Communication is two way process. Both parties 9all parties) must be sincere to make peace. Do not forget 1949 when some parties (tribes) went against the new infant Burma government by thinking and expecting their colonial masters would come and help them as Angels of God. What was the reality. They were ignored. What is happening in the frontier areas are the reciprocation of what the rebels and insurgents had done on Burmese innocent people.